KADINKA INTARNETKA EE LACAG-KEYDSIGA
Carruurta Saint Paul ku nool oo dhan mid kasta waa in uu fursad u helo barnaamijka CollegeBound
CollegeBound Saint Paul waxa ay qoysaska ku caawineysaa maalgelinta waxbarashada iyo mustaqbalka carruurtooda
Bulshadaada maanta ku caawi in ay xoogeysato
KUWA KALA DUWAN
Waxaan ku dareynaa ilma kasta oo dhashay 1-da Jannaayo iyo wixii ka dambeeyey, habka ay ku heli doonaan tacliin sare iyo tababar shaqo iyadoo loo furayo koonto lacag-keydin oo u gaar ah.
CollegeBound Saint Paul waa mashruucii ugu horreeyay noociisa magaalada oo dhan oo waa lacag in loo sii dhigto kuleejka si qoysaska loogu bilaabo aasaas adag oo lagu maalgelin doono waxbarashada iyo mustaqbalka carruurtooda. Qoysasku waxa ay ku deeqi karaan lacag dheeraad ah iyaga oo la soconaya koontada lacag-keydinta kuleejka ee la hiigsanayo inta ilmuhu soo korayo.
Bilaabidda lacag-keydinta iyo qorsheynta fursadaha waxbarasho ee carruurta waa wax ku adkaan kara qoysaska, sababtaas ayaa bulshada isu keentay in ay sameeyaan barnaamijka CollegeBound Saint Paul si qoysaska loogu caawiyo lacag-keydinta iyo qorsheynta danaha ilmahooda yaryar. Bilaabidda in la sameeyo lacag-keydinta iyo qorsheynta waxbarashada ilmaha ee hadda ayaa keeni karta is-beddel weyn marka ilmuhu bilaabayo kuleejka.
CollegeBound Saint Paul waxaa loo sameeyey looguna tala galay bulshada si loogu caawiyo qoysaska in ay ilmahooda u helaan fursado waxbarasho oo ka dambeeya dugsiga sare. Bilaabidda in la sameeyo lacag-keydinta iyo qorsheynta waxbarashada ilmaha ee hadda ayaa keeni karta is-beddel weyn marka ilmuhu bilaabayo kuleejka.
Maantaba ku qor ilmahaaga
Akhriso faahfaahinta barnaamijka oo badan
Bulshadaada ku caawi in ay xoogeysato
RUKUMO FARRIIMAHA CINWAANKA BOOSTADA INTARNETKA
Hoos ku qor cinwaankaaga boostada intarnetka si laguugu soo diro farriimaha CollegeBound
Dirista cinwaankaaga boostada intarnetka ka dib waxaa laguu sii gudbin doonaa barta intarnetka ee Magaalada Saint Paul.